Umasipala uphendula ngenkinga kadoti | News24
Umasipala uphendula ngenkinga kadoti
ISITHOMBE: sigciniweUdoti abakhala ngokuthi awulandwa eSobantu.
UMASIPALA uMsunduzi usuphumele obala ngezinkinga obhekene nazo mayelana nokubambezeleka kokuqoqwa kukadoti ezindaweni ezahlukene eMgungundlovu.
Loku kuza ngemuva kokuba i-Echo ibhale udaba ngezinkinga umphakathi waseSobantu obhekene nazo uma kumele uqoqelwe udoti.
Lolu daba lushicilelwe ephepheni langoLwesine olwedlule mhla zingama-23 kuMasingana (January).
Amalunga alo mphakathi ayekhala ngokuthi iloli elithutha udoti lifika noma inini alisenalo usuku elifika ngalo kanti kwezinye izinsuku kuke kuphele ngisho isonto lingazange lifike.
Bathi uma ngabe kwenzekile lafika lifika ebusuku sebelele kanti amanye amalunga omphakathi wona athi awazixaki nanokuthi awukhiphe udoti awubeke emgwaqeni ngoba vele ugcina usuchithwa izinja phansi ungalandiwe.
Ngemuva kokushicilelwa kwalolu daba izindawo eziningi nazo seziphumele obala zikhala ngokushintsha kwendlela ebekulandwa ngayo udoti kanye nokungalandwa kwawo.
Ibamba lokhulumela umasipala uMsunduzi uNks Ntobeko Ngcobo utshele i-Echo ukuthi into eyenza ukuthi kube nokubambezeleka ekuqoqweni kukadoti ingoba umasipala unenkinga ngamanye amaloli kadoti afile okumanje okumatasa ngawo elungiswa.
“Lama loli amancane akhona esinawo kumele asize wonke umphakathi. Kodwa nomakunjalo umasipala uzama ngazo zonke izindlela zokwenza ukuqinisekisa ukuthi ukuphazamiseka kube kuncane. Uma ngabe amanye amaloli eselungele ukusebenza, ukuqoqwa kukadoti kuzo buyela kokwejwayelekile.
“Umasipala uyaxolisa ngokwenzekayo kanti futhi siyawuqinisekisa umphakathi ukuthi senza konke okusemandleni ukuthi izinkinga ezifgana nalezi ziyalungiswa,” kubeka yena.